Ogaden News Agency (ONA) – Taliban oo Ka Hadashay Wada-hadallada Mareykanka.
Taliban oo Ka Hadashay Wada-hadallada Mareykanka.
Posted by ONA Admin	/ December 20, 2018
Kooxda Taliban ayaa sheegtay in wada-hadallada socda oo ay la leeyihiin Mareykanka diiradda lagu saarayo oo kaliya sidii ciidamada ajnabiga ah looga saari lahaa dalka Afghanistan, islamarkaana wararka arrintaas ku duwan ay yihiin dacaayad.
Wada-hadallada oo saddex maalmood socda, islamarkaana ay marti-gelisay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lasoo gaba gabeeyay shalay. Dawlada Pakistan ayaa sheegtay inay agaasimeen wada-hadalladan lala leeyahay kooxda Taliban, si ay Mareykanka uga caawiso qorshe uu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 17-ka sano socda ee Afghanistan.
Zalmay Khalilzad, oo ah ergeyga gaarka ah ee dib u heshiisiinta dalka Afghanistan, ayaa hoggaaminaya wada-hadalladan, oo ay ka qeyb galayaan saraakiil ka socota Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta iyo Pakistan.